२०७६ असोज २८ मंगलबार १६:०७:०० प्रकाशित
काठमाडौ । नेपाली राष्ट्रिय क्रीकेट टिमका कप्तान पारस खड्काले राष्ट्रिय टिमको कप्तानी छोडेको घोषणा गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी) ले नेपाल क्रिकेट संघ ९क्यान० को निलम्बन फिर्ता गरेकै भोलिपल्टै पारसले कप्तानीबाट राजीनामा घोषणा गरेका हुन्।
उनले आफ्नो आधिकारिक फेसबूक पेजमा समेत यो कुरालाइ उल्लेख गरेका छन । झण्डै एक दशकदेखि राष्ट्रिय टिमको नेतृत्व सम्हालेका खड्काले अब कप्तान पद छाड्ने निर्णय गरेका हुन् ।
पारसले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै आफुले नयाँ तरिकाले क्रिकेटलाई अगाडि बढाउन बाटो खुला गर्न राजिनामा दिएको प्रष्ट पारेका छन् ।
‘नेपाली क्रिकेटको निलम्बन फुकुवा भएको थाहा पाउँदा निकै राम्रो लागेको छ। नेपाली क्रिकेट, खेलाडी तथा सरोकारवालाका लागि नयाँ समितिले राम्रो गरोस भन्‍ने कामना गर्दछु,’ पारसले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘मैले तत्काल लागू हुने गरी नेपाली क्रिकेट टोलीको कप्तानबाट राजिनामा दिने निर्णय गरेको छु । यो अविश्वनीय यात्रामा मलाई सहयोग गर्ने सबै खेलाडी, प्रशिक्षक, अम्पायर, साथीहरु तथा मेरा परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। जय नेपाल!’
पारस खड्काले नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले प्रत्येक वर्ष प्रदान गर्ने वर्ष खेलाडी उपाधि दुई पटक प्राप्त गरेका छन् । उनले वि.सं. २०६६ र २०६९ को वर्ष खेलाडी उपाधि जितेका थिए । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान पारसको नेतृत्वमा नेपालले वि.स. २०६९ मा दुई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता जितेको थियो भने एकको फाइनलमा पुगेको थियो ।
पारस कप्तान रहेको टिमले मलेसियामा सम्पन्न आइसिसी वर्ल्ड क्रिकेट लिग डिभिजन-४ र त्यस लगत्तै दुबईमा एसिसी एलिट ट्रफी २०१३ को उपाधि जित्यो । त्यस्तै चैतमा नेपालमा सम्पन्न एसिसी टि-ट्वान्टी कप २०१३को फाइनल खेलेको थियो । एसिसीका दुबै प्रतियोगितामा पारस ‘म्यान अफ द सिरिज’ बने
। उनकै नेतृत्वमा सशस्त्र प्रहरी बल (एपिएफ)ले घरेलु प्रतियोगितामा पनि सफलता चुमेको थियो । हाल उनी न्यू जील्याण्डमा हुने २०१४ क्रिकेट विश्वकप छनौट खेल्नका लागि पुगेका छन् । न्युजिल्याण्डमा दुखद नतिजा निकाले पनि पारसकाे कप्तानिमा नेपालले बङ्गलादेशमा सम्पन्न टि टवान्टि वर्ल्डकपमा सुखद नतिजा निकालेकाे थियो ।
नेपालका कप्तान पारस खड्का अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी) ले जारी गरेको टि-ट्वान्टी क्रिकेटको ब्याटिङ र अलराउन्डर विधाको बरियतामा पर्न सफल भएका छन् ।